Image Distorted – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on5November 2009 17 February 2010 Categories Excerpts, Parenting, Reproduction
5 thoughts on “Image Distorted”
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပညာပေးမှုပါ။ မိဘဆိုတာ တကယ်ကို သိစိတ်ကိုရော မသိစိတ်ကိုရော ပဲ့ပြင်နေပါတယ်။ မိခင် သို့ ဖခင် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူတစ်ခုခုဟာ သားသမီးရဲ့ မသိစိတ်ရော သိစိတ်မှာရော အလွန်တရာ လွှမ်းမိုးပါတယ်။ မလေးစားနိုင်တဲ့၊ ထိခိုက်နာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ဆို ဘယ်လိုမျှကို ဖျောက်ဖျက်လို့ကို မရနိုင်တော့တာပါ။
ကျွန်မ အဲဒီ အကြောင်းအရာတွေကို အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
သြော်… မိန်းမ… မိန်းမ…
ဖတ်လိုက်ရတာ အတော် တုန်လှုပ်သွားတယ်
tt cho says:
7 November 2009 at 3:38 am
Your presentation is good. I will also follow it up. I amamum but I have not thought about it. Thank you so much.
18 November 2009 at 5:42 pm
ဆရာ့စာတော်တော်များများ ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် magazine မှာ ဆိုတော့ comment ရေးခွင့် မရခဲ့ဘူး။ ဆရာ့ရဲ့ စာအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အမေလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ ကလေးဘဝငယ်ငယ်တည်းက အဖေမကောင်းကြောင်း (အချက်အလက် အသေးစိတ် မပြောပေမယ့်) ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖေ့ကို မမုန်းခဲ့ပါဘူး။ ကြီးလာတော့ စာတွေ ဖတ်ရတော့ ပိုမမုန်းခဲ့ပါဘူး။ သူ့မှာလည်း အခြားအကြောင်းတွေ ရှိမယ်လို့ တွေးခဲ့မိပါတယ်။
(ကိုယ်နှိပ်ကွပ်ထားတဲ့ သားသမီးက ကိုယ့်ကို တစ်နေ့ကျ နားလည်လာလိမ့်မယ်၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးလာမယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သူတို့တွေ မိဘဘဝ ရောက်လာတဲ့အခါကျ နားလည်လာမှာပါလို့ တွေးရင် အဲဒီ့အတွေးဟာ တက်တက်စင်အောင် မှားပါကြောင်း ကျွန်တော့်အဖြစ်က သက်သေခံနေပါတယ်။) ဆိုတဲ့ ဆရာ့စကားကို ချွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံပါတယ်။
LeaveaReply to penai22 Cancel reply
Previous Previous post: Just Met Min Kike Soe San!